मलमासको समयमा दम्पतीहरु किन छुटिएर बस्छन ? - नेपालबहस
मलमासको समयमा दम्पतीहरु किन छुटिएर बस्छन ?
| १४:४२:३० मा प्रकाशित
३० भदाै, काठमाडाैं । आउदो असोज २ गतेदेखि मलमास सुरु हुँदै छ । एक महिनासम्मको समयलाई अधिक मास भनिन्छ । अधिकमास अर्थात मलमासको बेला विवाहित जोडीहरुसँगै बस्न हुँदैन भन्ने मान्यता भएकाले नयाँ दुलहीहरु माइत जान्छन् ।
आखिर मलमास के हो त ? यसलाई अन्य महिनाहरुभन्दा किन फरक तरिकाले हेरिन्छ ? अधिक मास किन पर्छ त ? अधिक मासलाई मलमास, पुरुषोत्तम महिना जस्ता नामहरुले पनि बुझिन्छ । हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुका अनुसार यो १ महिनाको समयमा कुनै पनि धार्मिक कार्यहरु गर्न नहुने मान्यता रहेको छ ।
त्यसकारण मलमासको बेला नयाँ घर सर्ने, जग राख्ने, विवाह, व्रतबन्ध, जस्ता शुभकार्यहरु हुँदैनन् । ज्योतिष शास्त्रमा पनि यस समयमा विशेष धार्मिक कार्यहरुलाई निषेध नै गरिएको छ ।
यो बेला गर्भ रहन गयो भने बच्चा स्वस्थ्य जन्मीदैन भन्ने बिश्वास भएकाले मलमासको बेला शारिरिक सम्पर्क गर्न समेत बन्देज गरिएको छ । नव दम्वतीहरु त्यसकारणले पनि यो बेला माईत जाने वा छुटिएर बस्ने गरेको पाईन्छ ।
आजदेखि मलमास शुरु ६ दिन पहिले
मलमासमा शुभ कार्य गर्न नहुने विज्ञहरुकाे सुझाव ७ दिन पहिले
वर्षाले पहिरो खस्दा वडा कार्यालय पुरियो ५ मिनेट पहिले
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्षले गरे आत्महत्या १९ मिनेट पहिले
बारबर्दियामा पाँचका लागि दिन निषेधाज्ञा २५ मिनेट पहिले